Tanàna meksikana ao amin'ny 'voalohany 1' amin'ny laharam-pahamehana amin'ny magazine Travel + Leasure | Vaovao momba ny dia
Tanàna meksikana ao amin'ny 'voalohany 1' amin'ny filaharan'ny magazine Travel + Leasure
Carmen Guillen | | General, Mexico DF, About us
Ilay gazety malaza Travel + Leasure nanao fanadihadiana teo amin'ireo mpamaky azy. Tao anatin'izany dia nanontany tena mazava izy hoe iza no tanàna tsara indrindra hitsidika azy ary ny valiny dia mahagaga. Tsy noho ny tanàna mandresy dia tsy mendrika izany toerana izany, fa satria ny tsirairay dia niloka tanàna lehibe hafa fanta-daza kokoa sy notsidihin'ireo mpizahatany isan-taona.
Tsy hihemotra amin'ny vaovao intsony izahay, ary etsy ambany dia holazainay aminao hoe iza ny tanàna meksikanina no mpandresy tamin'ny toerana mendri-kaja toy izany ary iza koa ireo tanàna 14 ambiny izay nahazo isa tena tsara tamin'ny fanadihadiana ihany koa.
1 San Miguel de Allende, tanàna Mexico mandresy
2 Inona no manokana hitsidihan'i San Miguel de Allende?
San Miguel de Allende, tanàna Mexico mandresy
Sambany tao anatin'ny 22 taona San Miguel de Allende no tanàna meksikanana nandresy tamin'ity fanadihadiana momba ny tanàna tsara indrindra ity amin'ity taona 2017 ity.
Fa azo antoka fa ny fanontaniana mahazatra indrindra apetrakao ankehitriny dia ny hoe inona no ifotoran'izy ireo hanaovana ilay lisitra. Eny, nanantona mivantana ny mpamakiny izy ireo ho an'ny traikefa niainany sy ny safidiny nandritra ny fiainany nanerantany. Ny valin'izany rehetra izany dia nametraka ny tanàna meksikana tamin'ny toerana voalohany ary ny ambiny amin'ireo toerana dia nobodoin'ny tanàna maro karazana sy tena hafa.
Raha manontany tena ianao hoe inona ny fanasokajiana ankapobeny sy ankapobeny an'ity fanadihadiana ity dia izao no vokany:
Charleston, South Carolina, Etazonia
Cape Town, Afrika Atsimo.
Santa Fe, New Mexico, Etazonia
Siam Reap, Kambodza.
Eny, ny tanàna espaniola irery no miseho dia i Barcelona, ​​ary amin'ny toerana farany ... Ny firenentsika dia tsy dia milahatra tsara amin'ity fanadihadiana ity, fa raha jerena ireo toerana marobe mahafinaritra eran'izao tontolo izao hijerena sy hitsidihana, na ! aleo mimenomenona be!
Inona no manokana hitsidihan'i San Miguel de Allende?
San Miguel de Allende dia heverina ho iray amin'ireo tanàna tsara indrindra eto Mexico. Tanàna iray misy ny loko eo amin'ny arabe mifamezivezy sy tranainy. dia tanàna cosmopolitan, manana patio lehibe izay ny ahitra no mahavariana indrindra ary tranobe an'ohatra sy tsara tarehy.
San Miguel de Allende dia mandray mpizahatany marobe avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay mijery ny maritrano manokana. Ary koa ny spaony sy ny ivon-toerany mafana dia manintona lehibe hahasarika mpitsidika marobe ary nahazoany nantsoina hoe tanànan'ny loharano.
Teboka matanjaka iray hafa manasongadina ity tanàna ity dia izy io Lova ara-kolontsaina maha-olombelona, Noho ny zava-drehetra voalaza teo aloha ihany, fa koa amin'ny hetsika isan-karazany amin'ny kanto sy ara-kolontsaina izay azo ankafizina mandritra ny taona.
Satria tanàna iray misy zavatra be aseho izy ity, raha mitsangatsangana any ianao dia manoro hevitra ny dia farafaharatsiny 5 andro fenoRaha te hiala ianao dia milomano tsara amin'ny kolontsaina meksikana ary indrindra eto amin'ity tanàna mahafinaritra ity. Mamporisika anao koa izahay hanao kiraro tena ahazoana aina, satria tanàna mahafinaritra ny mandeha izy io. Soso-kevitra ny hikarokaroka an-tongotra azy io mba hahafahanao hijoro isaky ny joro manaitra (misy maro).
Raha ny ahiahinao indrindra rehefa mandeha any ianao dia ny toerana ipetrahanao dia tsy mifanakaiky amin'ny afovoan-tanàna manan-tantara, aza omena lanja bebe kokoa! San Miguel de Allende dia tanàna ao akaiky ny zava-drehetra, Ka miaraka amin'ny fitateram-bahoaka na an-tongotra dia afaka mifindra lavorary amin'ny toerana iray ianao.
Raha akaiky ny fitsangatsangananao hahita ity tanàna ity dia tokony ho fantatrao fa manomboka amin'ny 4 Aogositra ao amin'ny Teatra Angela Peralta. Haharitra ny 4 ka hatramin'ny 26 Aogositra ity seho ity.
Ahoana ny hevitrao momba ny famaritana ity tanàna mahafinaritra ity? Fantatrao ve ny fisiany? Rehefa nahita ny sariny izy ary nahalala bebe kokoa momba izay ananan'ny tanàna, mieritreritra ve ianao fa mendrika io isa io na angamba "nanitatra" an'io loka io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tanàna meksikana ao amin'ny 'voalohany 1' amin'ny filaharan'ny magazine Travel + Leasure
Ireo dobo voajanahary tsara indrindra eto amin'ny firenentsika
Tanàna mahafinaritra 9 ho fialantsasatra